Hooyo waxay dhashaa mataano madow iyo cadaan ah, laakiin waalidkood ma cadaan - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Hooyo waxay dhashaa mataano madow iyo cadaan ah, laakiin waalidkood ma cadaan - SANTE PLUS MAG
Kaliya daqiiqado ayaa kala sooca dhalashada Daniel iyo David Omirin. Marka wax yar oo u dhexeeyaa haddana farqi weyn ayaa u dhexeeya iyaga. Halka waalidkood, Stacy, 30, iyo Babajide, 38, ay yihiin madow, Daniel ayaa leh maqaarka madow iyo timo madow halka walaalkiis David uu leeyahay maqaar cad iyo timo dahab ah, gudbiso tabloid Ingiriis ah Metro. Labada walaalo sidoo kale waxay leeyihiin gabar 4 jir ah oo walaasheed la yiraahdo Demilade.
Demilade iyo labadiisa walaal - Source: Instagram / Danielandavid2
David wuxuu la xanuunsanayaa maqnaanshaha lagu dhasho ee melanin
David wuxuu u muuqdaa inuu yahay albino. Xaalad sababa maqaarka iyo timaha qolofta. Su'aal ahaan, maqnaanshaha lagu dhasho ee melanin.
David iyo Daniel - Xigasho: Instagram / Danielandavid2
Waalidiinta mataanaha waxay ku jiraan indhaha dadka
Labada mataano ah kama baxsan doonaan aragtida tooska loogu kala duwanaaday "kala duwanaanshahooda". Mararka qaarkood waalidkood xitaa waxay xaq u leeyihiin su'aalo si loo ogaado haddii ay carruurtu dhab ahaan iyagu leeyihiinSheeko xasuusinaysa tii Rachel Halbet oo umushay 3 cunug oo madow ah.
“Waa inaan ka jawaabo su’aalaha markasta oo aan banaanka ka joogno,” ayay tiri Stacy, hooyadood. Marka, naqshadeeyaha dharka ayaa lagu qasbay inuu ka jawaabo su'aalaha sida: "Iga raali noqo marwo, midkee carruurta kaa leh?" ". Haweeneydu waxay si fudud ugu sheegtaa inay labaduba iyagu leeyihiin. Laakiin muuqaalada ay xaq u leedahay inay u ekaato kaftan.
David iyo Daniel oo wada ciyaaraya - Source: Instagram / Danielandavid2
Daanyeel wuxuu bartay inay carruurtiisu ka duwan yihiin maalinta dhalashada
Waxay ahayd Nayjeeriya in labada mataano ay dhasheen. Dhaqaatiirta ayaa u sheegay Stacy in caruurta aysan isku mid aheyn. Waxay ahayd markay indhaheeda ku aragtay inay fahamtay waxay dhakhaatiirtu dhahayaan.
“Daanyeel ayaa ugu horreeyay, ka dibna kalkaalisada ayaa tidhi ilmaha labaad wuxuu lahaa timo dahab ah. Hooyada dhashay saddex carruur ah ayaa tiri. Way naxday, iyadu ma aysan fahmin sida ay tani suurtagal ku noqon karto illaa ay ka garato midabka maqaarka Daa'uud..
David iyo Daniel oo isku dhinac ah - Source: Instagram / Danielandavid2
Ka dib amakaaga waalidiinta, waxay la yaabeen muraayadaha caruurta "la jeclaado" waxayna u arkeen David "mucjiso". ". Stacy iyo Babajide ma aysan walwalsaneyn. Tani ma ahayn kiiska kuwan waalidiinta arkay ilmahooda oo timo cirro leh.
Dhaqaatiirta ayaa ku deg degay sariirta mataanaha si ay sawiro uga qaadaan. Qaar badan oo iyaga ka mid ah, lahaa "weligay ma arkin wax sidan oo kale ah."
Demilade dhexda labadiisa walaal - Instagram / Danielandavid2
Mataanaha waxaa loo tixgeliyaa "gaar"
Sida iska cad, markii David iyo Daanyeel la baray xubnaha qoyskooda, waxay la yaabeen sida waalidiinta oo kale. Stacy ayaa tiri: Qoysku waxay u maleynayaan inay yihiin kuwo cajiib ah aadna ay caan ugu yihiin iyada ”.
Qoyska oo dhan - Source: Instagram / Danielandavid2
Sawirka ay matalaan ayaa ah in dumarka kale ee reer Nigeria ay ku aaminaan Stacy inay "tukadaan" habeenki, si ay maalin uun u dhalaan mataano noocaas ah. Daanyeel iyo Daa’uud waa cad yihiin loo arkaa mid gaar ah gudaha Nigeria sababta oo ah kiiskoodu intaas oo keli ah ayaa halkaa ka jira. Xaqiiqdii, in kasta oo xaqiiqda ah in albinism-ka loo tixgeliyo "anomaly", haddana wuu layaabi karaa sida ay tahay xaaladda laba walaalo ah oo walaalo ah oo quruxda aduunka ku qurxiyay.
David iyo Daniel oo labbisan dhar dhaqameedkii reer Nigeria - Source: Instagram / Danielandavid2
Waa maxay albinism?
Albinism waa cillad hidde ah oo lagu garto maqnaanshaha ama maqnaanshaha weyn ee midabka indhaha iyo mararka qaarkood maqaarka iyo timaha. Waxaa jira albinism oculocutaneous ah oo walaac leh indhaha, maqaarka iyo timaha laakiin sidoo kale albinismka indhaha oo welwel leh indhaha kaliya. Markuu cunugu leeyahay albinism oculocutaneous, muuqaalkiisa dhaxalka ayaa ah nooca reosomal recessive. Astaamaha hidaha ee hiddaha ee albiniska indhaha waa ku xidhan koromosoomka X. Astaantan waxaa loogu talagalay wiilasha oo keliya.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii hore https://www.santeplusmag.com/une-maman-donne-naissance-a-des-jumeaux-noirs-et-blancs-mais-aucun-des-parents-nest-blanc/
TELES RELAY 40677 posts 1 comments
Fatema Saha Tabar Reer Iran Angelina Jolie, Warka Maanta Xogta - Video
Ahmiyadaha Togolese Gilbert Houngbo ee Fida - Jeune Afrique